Macluumaadka Elektiroonigga ah iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Maxay tahay Sababaha Loo Fiirin Karo Iyadoo La Iibsanaayo Muraayadaha 3D
Nidaamka '3D' ee loo yaqaan 'polarized 3D' wuxuu adeegsadaa muraayadaha muraayadaha si uu u soo saaro dhalanteed sawirro saddex-geesood ah isagoo hagaajinaya iftiinka isha walba galaya. Si loo muujiyo sawirrada iyo filimada istiraatiijiyadeed, laba sawir ayaa lagu saadaalinayaa isla shaashadda ama lagu muujiyaa miirayaasha kala-soocidda kala duwan. Evolution of 3D lenses: Noocyada dhiciska ah ee muraayadaha XNUMXD may ahayn […]Read More
Bangiyada Awoodda iyo Sababta Loo Leeyahay Mid
Waa maxay bangi awood? Bangiyada korontada waxaa loo isticmaalaa siinta awood la qaadi karo si ay ugu soo dallacaan aaladaha batteriga ku shaqeeya sida taleefannada gacanta iyo waxyaabaha kale ee la midka ah ee leh isku xirnaanta USB: waxay ka qaadi karaan USB ama silig la'aan. Sidee baanku u shaqeeyaa? Bangiyada korontadu maaha kaliya batari fudud: waxay isticmaalaan nidaamyo elektaroonik ah oo casri ah si ay ula tacaalaan dambiga […]Read More
Kaameeradda dhijitaalka-xaji daqiiqad
Waa maxay kamarad dijital ah? Kaamirada dhijitaalka ah waa kamarad ku keydinaysa sawirrada xusuusta elektarooniga halkii filim laga dhigi lahaa. Sababtaas awgeed, kamarad dijital ah ayaa qaban karta sawirro badan oo ka badan kamaradda filimka caadiga ah. Kaamirada dhijitaalka ah mararka qaar waxay ka koobnaan kartaa boqolaal ama kumanaan sawir. Inbadan waxay isticmaalaan kaarka xusuusta si ay u keydiyaan. […]Read More
10-ka Bandhig ee ugu sarreeya ee Elektaroonigga Macaamiisha
Markii aan ka hadlayno qalabka elektaroonigga ah, waxyaabaha sida caadiga ah maskaxdeenna ku soo dhaca laga yaabee inay yihiin taleefannada gacanta iyo telefishinnada. Laakiin waxaa ku jira habka waxyaabo badan oo ka mid ah. Tusaale ahaan, muraayadaha 3D, xeedho, baytariyada dhijitaalka ah, samaacadaha dhegaha / samaacadaha, sigaarka elektarooniga ah. IWM Waxay ka kooban tahay alaabo elektaroonik ah oo kala duwan waxaana lagu soo bandhigayaa bandhigyada ganacsiga adduunka oo idil. […]Read More
Helitaanka Bixiyeyaasha Ugu Wanaagsan ee Elektaroonikada Macaamiisha kale
Doorashada alaab-qeybiyeyaasha saxda ah ee korantada kale ee macaamiisha waa tallaabo muhiim ah oo lagu hubinayo in meheraddaadu ay si habsami leh u socoto. Maaraynta silsiladda maareynta sahayda waxay umuuqan kartaa arin adag, laakiin runti waa wax fudud. Haddaad tihiin soosaarayaasha miisaanka warshadaha, waxaad leedihiin wado aad ku maal gashataan la taliyayaal iyo khabiiro takhasus leh oo idinka caawin kara inaad maareysaan isku xirnaashihiinna iyo […]Read More
Ilaha ugu Wanaagsan ee Wiishashka iyo Xarkaha
Adduunyada, halkaasoo otomaatiyada warshadaha ay ka sii caan baxeyso sidii hore, baahida loo qabo alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoon yahay oo ah fiilooyin, fiilooyin, iyo shirarka fiilooyinka ayaa ka badan. Tikniyoolajiyadda waxsoosaarka waxay u guureysaa heerar aad u horumarsan oo otomaatig ah iyo jawiga noocan ah, haysashada alaab-qeybiye la isku halleyn karo ayaa isbeddel sameyn kara Aad ayey muhiim ugu tahay [for]Read More
Qalabka Ciyaaraha Fiidiyowga - Maxaan Ugu Baahanahay Inaan Isbarbar dhigo Qiimaha?
Inta badan qalabka ciyaarta fiidiyowga waxaa loo soo bandhigaa iib ahaan macaamiisha bogagga internetka ee iibiya duruufaha. Shirkadaha qaarkood sidoo kale waxay iibiyaan astaantooda gaarka ah ee qalabka, halka kuwa kale ay isticmaalaan bixiyeyaasha saddexaad. Tani waa sababta macmiilka awoodiisa uu ka heli karo qalabka internetka lagu wareero. Si kastaba ha noqotee, maahan dhammaan shirkadaha inay bixiyaan waxyaabo isku mid ah ama […]Read More